Ny Lalana Marina! Ho avy tsy ho ela ny Fanjakan’Andriamanitra! TheTrueWay.xyz | Nohazavaina ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly — Ny Lalana Marina — TheTrueWay.xyz & jwjw.org
Ny Lalana Marina! Ho avy tsy ho ela ny Fanjakan’Andriamanitra! TheTrueWay.xyz
Tantara amin'ny Baiboly
Ny Lalana Marina! Ho avy tsy ho ela ny Fanjakan’Andriamanitra!
Ny tenin'Andriamanitra dia what tokony hotadiavin'ny olona. Izy io no fanilo mamirapiratran’ny fahamarinana izay afaka manampy ny olona hanitsy ny fanompoany amin’ilay Mahery Indrindra.
Ny iraka ataon’io hetsika io dia ny hiverina lavitra araka izay azo atao any amin’ireo zavatra ninoan’ireo mpianatr’i Kristy tany am-boalohany, ka hanaisotra ny fampianaran-diso izay efa nitsofoka tao.Asan'ny Apostoly 9: 1-2). Noho izany, io iraka io dia antsoina hoe Ny Lalana Marina.
Ity tranonkala ity dia natao ho an'ny olona hanonta tantara sy foto-kevitra ho an'ny tenany na ho an'ny asa fanompoana!
Ny marina tsy mampaninona ny anontaniana fa ny lainga.
Betsaka ny lehilahy sy fikambanana maniry ny hibanjinan’ny olona azy, ka mihambo ho manohana azy sy manao famantarana mahery vaika. Tsy ho voafitaka anefa ny vahoakan’Andriamanitra. Ny tenin'olombelona dia mitarika ho amin'ny famoizam-po fotsiny. Jeremia 10: 23
Ireo tia an’Andriamanitra dia hijery mandrakariva ny hafatr’Andriamanitra mba hahazoana toky sy fitarihana. Ity tranonkala ity dia manampy ny olona hanamarina ny finoany sy hanitsy ny fanompoam-pivavahany, raha ilaina, ary hifandray tsara amin’ilay Tsitoha. Asan'ny Apostoly 17: 11-12
Mety hihevitra ianao fa tsy mila manamarina ny zavatra inoanao. Izany indrindra no izy ny mpanohitra lehibe an'ny Tsitoha te-hieritreritra anao. Tiany hanaraka ny tenin'olombelona ny olona fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Mety hampidi-doza ny fahafaham-po.
Enga anie isika ka ho hita fa nanitsy ny fivavahantsika tamin'ny andro fizahana!
Tsidiho ny vondrona Facebook
© 2022 Ny Lalana Marina! Ho avy tsy ho ela ny Fanjakan’Andriamanitra! TheTrueWay.xyz